बाङ्गेमुढामा पाँचसय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला – Khabar PatrikaNp
मन्दिर पूनर्निर्माणका क्रममा पित्तलको गणेशको मुर्ति उप्काउंदा पछाडि ढुगांको करिब पाँच सय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला परेको हो । असावधानीका कारण उक्त मूर्ति भने टुक्रिएको छ । टुक्रिएको मूर्ति पुरातत्व विभागको सहयोगमा जोड्न लागेको स्थानीय कृष्णप्रसाद मानन्धरले बताए ।
तरकारी बेच्दै गरेको भेटिए संक्रमित
विराटनगर, २३ साउन । विराटनगर महानगरपालिकाले तरकारी र फलफूलको व्यापार हुँदै आएको नयाँ र पुरानो गुद्री बजारमा काम गर्नेहरुमध्ये १०÷१० जनाको स्वाब परीक्षणका लागि संकलन गर्यो ।
तरकारी किन्ने र बेच्नेहरुको अत्याधिक भीडभाड हुने गुद्री बजारबाट शंकास्पदहरुलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएको थियो । मानवीय चहलपहल बढी हुनेमा पर्ने गुद्री बजारबाट त्यहाँ काम गर्नेमध्ये शंकास्पदको स्वाब संकलन गरिए पनि ठेगानामा गुद्री बजारमा काम गर्ने भनेर खुलाइएको थिएन । स्वाब परीक्षणका लागि दिएकाहरुले पनि आफ्नो घर भएको र बस्ने ठाउँको ठेगाना टिपाएका थिए ।
त्यत्तिकैमा कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट बुधबार साँझतिर विराटनगर महानगरपालिका–१७ का ३५ वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भयो । कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा भर्ना गर्नलाई उनको खोजीका लागि प्रहरी चौकी मटेरुवा र नगर रक्षकको अलग–अलग टोली परिचालित भयो ।
वडाअध्यक्षलाई खवर गरेर प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) ताराबहादुर बस्नेत नेत्रृत्वको टोली घरमै पुग्यो । तर उनी घरमा भेटिएनन् । परिवारका सदस्यबाट नम्बर लिएर फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । धेरै समयको प्रयासपछि सम्पर्क हुँदा उनी विराटनगर–११ मा रहेको नयाँ गुद्री बजारमा शब्जी बेचिरहेका थिए ।
उनी गुद्री बजारमा तरकारी बिक्री गरिरहेका छन् भन्ने सुनेर उपचारका लागि लैजान नगर प्रहरीका निरीक्षक राजन पौडेलको नेत्रृत्वमा नगर रक्षकको टोली पुग्यो । टोली पुग्दा उनले काम गर्ने पसलमा शब्जी किन्नेहरुको निक्कै भीडभाड थियो । पसलबाट आलु, प्याज र हरियो साग शब्जी किनबेच हुन्छ ।
गुद्री बजारको शब्जी पसलमा काम गर्छन् भन्ने कुरा थाहा नहुँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेका उनको खोजीमा प्रहरी र नगर रक्षकले निक्कै समय खर्चनु प¥यो । उनका दाजु–भाईले स्वाब परीक्षण गराएका थिए । भाईको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको महानगरले जनाएको छ ।
‘स्वाब परीक्षणका लागि दिएर उनी शब्जी बेच्न गुद्री बजारतिर गएछन्,’ निरीक्षक पौडेलले भने, ‘रिपोर्ट पोजेटिभ आइरहँदा ती पुरुष भने शब्जी बेचिरहेका थिए ।’ पसलमा नियमित शब्जी बेच्ने काम गर्ने पुरुषबाट कति जनाले शब्जी लिएर गए र उनीसँग कति जना सम्पर्कमा रहे भन्ने कुरा यकिन हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ ।
उनलाई भने गुद्रीबाटै उठाएर उपचारका लागि लगियो । ती पुरुषबाट अरु धेरैलाई कोरोना सरेको हुन सक्ने आशंका महानगरले गरेको छ । संक्रमित भएपछि पनि शब्जी बेचिरहेको पाइएपछि गुद्री बजारका व्यापारीदेखि लिएर त्यहाँ तरकारी किन्न जानेहरु त्रसित बनेका छन् ।
यसअघि साउन १४ गते बुधबार कोरोना देखिएका अर्का संक्रमित पनि विराटनगरको शनिमन्दिर चौकमा पान बेचिरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए । महानगरले पानपसलबाटै एम्बुलेन्समा राखेर आइसोलेसनमा भर्ना गरेको थियो ।
उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कोरोना जाँच गराएका थिए । परीक्षणका लागि स्वाब दिएर पान बेच्न आएका उनको रिपोर्ट पछि पोजेटिभ देखिएको थियो ।
कोरोनाको शंका लागेर परीक्षणको दायरामा आएकालाई स्थानीय प्रशासन र महानगरले ‘होम क्वारेन्टाइन’मा बस्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर स्वाब परीक्षण गर्न दिएकाहरु रिपोर्ट सार्वजनिक नभइकन आआफ्नो काममा व्यस्त हुने गरेको पाइएको छ ।
‘परीक्षण नगरिकन हेरेर मात्रै कोरोना लागेको कुरा प्रष्ट हुँदैन,’ महानगरको जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले भने, ‘त्यही भएर सबैले सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन ।’ स्वाब संकलन गर्न दिइएकाहरुले पनि रिपोर्ट नआएसम्म सचेत भएर बाहिरफेरो हिँडडुल र भेटघाट नगरिकन ‘होम क्वारेन्टाइन’मा बसिदिन उनको आग्रह छ ।
Prev६ दिन अघि मात्र विदेशबाट फर्केको यु’वतीको श’व भेटियो (भिडियो) समाचार
Nextअचम्मको झरना, जहाँ बषौदेखि आगो बलिरहेको छ ॐ लेखेर एक Share गर्नुस ;अधुरो काम बन्नेछ।
भगवान हरु लाई शंख द्वारा जल किन चढाइन्छ ? जान्न्नुहोस
२५ करोड लाग्छ यी नानीलाई बचाउन ! त्यो बच्चाको के गल्ति फेसबुक लाइभमा आमाको रुवाबासी, “(भिडियो)
नेपथ्यका नाइके गायक अमृत गुरुङ त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक विभागमा पुगे डा. गोबिन्द केसीको हाल सोध्न